Covid-19 ကပ်ရောဂါကျရောက် နေချိန် ကားရဲ့ ဘယ်နေရာတွေကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါသလဲ။
အသစ်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ Covid-19 Delta Varient ဟာအရင် strain တွေထက် အဆပေါင်း များစွာ လျင်မြန်လာပါပြီ။ အရင်ကဆို သတင်းတွေထဲမှာသာမြင်နေကြားနေရပေမဲ့ ဒီတခါမှာတော့ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်က မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီပါ ကူးစက်နေပြီဆိုတော့ အရင်ကထက် အများကြီး ဂရုတစိုက်နေရပါတော့မယ်။မိမိ ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ကာကွယ်ဖို့ လိုသလို မိမိရဲ့ ကားအတွင်းပိုင်းရဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာလေးတွေ ကို ဘယ်လိုမျိုး Safely Clean ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမလည်း ဆိုတာကို ဝေမျှပေး ချင်ပါတယ်။
Covid-19 ကပ်ရောဂါကျရောက် နေချိန် ကိုယ့်ကားလေး က ဘယ်ကိုသွားသွား သီးသန့် သွားလာနိုင်ရန် အသုံးပြုရတဲ့ ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။ ဒါကြောင့် မိမိ အိမ်အတွင်းပိုင်း ကိုသာမဟုတ်ဘဲ မိမိကားရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို လည်း သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
· အထိအတွေ့များတဲ့ မျက်နှာြပင်များကို သန့်ရှင်းပေးရပါမယ်။
· အတွင်း အပြင် ကားလက်ကိုင်များ၊
· ဂီယာ shift၊
· Wipers အတင်အချ levers၊
· Radio, CD,DVD,TV and Climate Control များရဲ့ မျက်နှာပြင် နှင့် ခလုတ်များ၊
· ယာဉ်မောင်း နဲ့ စီးနှင်းသူ တို့ရဲ့ လက်တင်နေရာများ၊
· ယာဉ်မောင်း နဲ့ စီးနှင်းသူ ကားထိုင်ခုံ adjustment levers & grab handles များ ကို သန့်စင်ရှင်းလင်းပေးရပါမယ်။
ကားအတွင်းပိုင်းများကို သန့်စင်တဲ့ အခါတွင် touch screens and electronics တွေကို သေချာဂရုပြီး သန့်စင်ပေးရပါမယ်။ ကားရဲ့ steering wheel ကို အချိန်ပိုပေးပြီး သန့်စင်ပေးလိုပါတယ်။ ကားထဲမှာလည်း hand sanitizer and disinfectant wipes တို့ကို အမြဲဆောင်ထားပြီး steering wheel နှင့် အခြားမျက်နှာပြင်များ ကို မထိတွေ့မီ သန့်စင်ပေးပြီးမှ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဆပ်ပြာ၊ ‌ရေ၊ 70% isopropyl alcohol တွေက household products များထဲမှာ coronavirus ကို အများဆုံး သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ Basic products တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားကို မသန့်ရှင်းမီ မိမိလက်ကို အရင်ဆုံး စက္ကန့် ၂၀ ဆေးကြောပေးရပါမယ်။ ထို့နောက် disposable gloves ကို ဝတ်ဆင်ရပါမယ်။ ကားကို သန့်စင်ပြီးချိန်မှာလည်း ချက်ခြင်း အသုံးမပြုဘဲ မိနစ် အနည်းငယ် စောင့်ဆိုင်းပေးရပါမယ်။ သန့်စင်ပြီးပေမယ့် ကား အတွင်းရှိ ပိုးများ သေဆုံးနိုင်ရန် အချိန်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုစရာ ကတော့ ကားထိုင်ခုံများဟာ leather and leather seats တွေဖြစ်တာကြောင့် alcohol-based products တွေကို မကြာခဏ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် urethane coating များကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားထိုင်ခုံ နဲ့ ကားထိုင်ခုံအစွပ် တွေကို သန့်စင်တဲ့ အခါ မှာ ရေအနည်းငယ်နဲ့ ဆပ်ပြာအနည်းငယ် ကိုသာ အသုံးပြုပြီး ညင်သာစွာ ဆေးကြောပေးခြင်းဖြင့် သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကားအတွင်းလေသန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ကိရိယာ Air Ionizer နဲ့လည်း In-Cabin air quality ကိုပိုမိုကောင်းမွန် သန့်စင်အောင် လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ မိမိရော မိမိကားပါ အမြဲဂရုပြုသန့်စင် ပေးပြီး Covid-19 ကပ်ရောဂါကြီးကို အတူတူ ကာကွယ်ကြမယ်နော်။
မိမိရော မိသားစုအာလုံး အတွက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး ငြိမ့်ညောင်းမှု့ကို ပေးစွမ်းနိုင်မဲ့ Toyota Innova
ကားတစီးဝယ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါ လုံခြုံမှု့၊ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လောင်စာဆီစား သက်သာစေဖို့ကို မစဉ်းစားခင် ကိုယ်စီးမဲ့ကားလေးရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆင်မြင့်တဲ့ ကားအတွင်းခန်းနဲ့ အပြင်ဘက်ဒီဇိုင်း၊ ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး ငြိမ့်ညောင်းတဲ့ကား၊ မိမိရော မိသားစုအာလုံး အတွက် စိတ်ချရသော လုံခြုံမှု့ကို ပေးစွမ်းနိုင် မဲ့ features ဒီဇိုင်းတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ကားတစ်စီး။ Toyota ချစ်သူတွေလည်း ဘယ်လိုကားဒီဇိုင်းလေးက ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီးသင့်လျော်မ လဲ ဆိုတာကို ရွေးချယ်လို့ရအောင် ဒီတပတ်မှာတော့ Toyota ကားတွေထဲက Toyota Innova ကားရဲ့ ဒီဇိုင်းအကြောင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အ‌ရှေ့ဘက်ဒီဇိုင်း Toyota Innova ရဲ့ အ‌ရှေ့ဘက်ဒီဇိုင်းကိုတော့ trapezoidal grille နဲ့ “ interlocking” skid plate theme တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပေးထားတာကြောင့် the Adventurous & Sophisticated ( စွန့်စားခြင်း ) ဆိုတဲ့ သွင်ပြင်ကို ခံစားရမဲ့ အပြင် အထက်တန်းဆန်တဲ့ MPV တစ်စီးရဲ့ အကြမ်းခံတဲ့ ပုံရိပ်ကိုပါ ထင်ဟပ်နေစေပါတယ်။ ခေတ်မီတဲ့အသွင်သစ် ပုံစံသာမက နေ့ရောညပါ
ကားတစ်စီးမဝယ်ခင် ဘယ်လိုမျိုးကားက ကိုယ့် အတွက် လိုအပ်လဲ စဉ်းစားကြည့်မယ်။
မိမိ က ခုမှ ကားတစ်စီးကို စတင်ပြီး ဝယ်မယ့် ဝယ်သူအသစ်လား ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိကားတစ်စီးရှိနေတော့ ကားအသစ်မဝယ်တာအကြာကြီးရှိပြီး ခုမှ ပြန်ဝယ်မယ့် သူလား။ ကားတစ်စီးကို ရှာတဲ့အခါ ကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တိုင်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံအောင်ကိုက်ညီတဲ့ ကားမျိုး တွေ့ဖို့ဆိုတာ အမြဲတမ်းမလွယ်ကူပါဘူး။ ကားဝယ်မယ် ဆိုတာ နဲ့ ကားတစ်စီး ကို ရွေးချယ်တဲ့ အခါ ရွေးချယ်စရာ ရာပေါင်းများစွာ တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ကားတစ်စီးမဝယ်ခင် ဘယ်လိုမျိုးကားက ကိုယ့် အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်လဲ ဆိုတာ သေချာလေ့လာပြီး ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကားတစ်စီး ကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ ကားတစ်စီးမဝယ်ခင် ဘယ်လိုအချက်တွေ စဉ်းစားဖို့လိုသလဲ ? ယနေ့ အချိန်အခါ မှာတော့ ရွေးချယ်စရာတွေက တော့ အများကြီး ပါပဲ။ အရင်ဆုံး အနေနဲ့ ဘယ်လိုကား အမျိုးအစားက မိမိလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီသလဲဆိုတာကို သိဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကို အရင်စဉ်းစား သင့်ပါတယ်။ • ဘယ်နှစ်ယောက်စီး ဝယ်ဖို့လိုအပ်သလဲ ? • နေ့စဉ် ကိုယ်မောင်းနှင် အသုံးပြုနေရတဲ့ လမ်းတွေ က အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေများလား ? မြို့ပြလမ်းမတွေများလား ? လမ်းကြမ်းတွေများလား ?
Copyright by TMYS.